Degso Happy Wheels loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (4.20 MB)
Degso Happy Wheels,
Happy Wheels, oo sidoo kale loo yaqaan Happy Wheels oo af Turki ah, waa nooca kumbuyuutarka ee ciyaarta xirfadda fiisikiska ku saleysan ee qalabka moobiilka.
Ka dib markaad ka soo degsato boggan Wheels Happy boggan, waxaad isla markiiba u ciyaari kartaa adigoon rakibin. Waxaan ku safreynaa gawaarida giraangiraha ee Wheels Happy, ciyaar xirfadeed oo noqon karta wax aan macquul ahayn oo xiiso leh isla waqtigaas. Ciyaarta, waxaa naloo siiyay fursad aan ku dooran karno halyeeyada kala duwan. Ka dib markii aan dooranay halyeeygeena, waxaan ku muujineynaa firfircoonidayada qeybaha si gaar ah loogu talagalay. Gawaarida aan u isticmaalno ciyaarta ayaa ah gawaari xiiso leh sida kuraasta curyaamiinta iyo sabuurada hal-qof. Hadafkeena ugu weyn inta aan ku wadno gawaaridaan maahan inaan rogrogo, shil uusan dhicin, inaan gaarno dhamaadka heerka anaga oo aan ku dhegin godadka iyo dabinada. iyo shilal dhiig ku daato.
Ciyaarta Happy Wheels ee ciyaarta fiisikiska ku saleysan, geesigeena ayaa ka falceliya sida ku xusan fisikiska ragga ah. Si kale haddii loo dhigo, addimada geesiyaasheena sida gacmaha iyo lugaha si xor ah ayey u lulmanayaan geesiyadeenuna wuxuu sameyn karaa waxyaabo badan. In kasta oo Happy Wheels uu leeyahay sawiro fudud oo 2D ah, macno darrada aad ciyaarta ku qaban doonto ayaa kugu filan inaad ku raaxaysato.
Si aad ugu socodsiiso Wheels Happy kombiyuutarkaaga, waa inaad raacdaa talaabooyinkan:
Feeji faylka faylka .zip ee aad ka soo dejisan doonto boggan adigoo adeegsanaya Winrar ama maareeyaha isku midka ah.
Jiid oo ku rid faylka .swf faylka faylka galka shabakadda internetka furan ee ciyaarta furan ciyaarta ayaa bilaaban doonta inay soo dejiso.
Happy Wheels Noocyada
Cabirka Faylka: 4.20 MB
Horumar: Jim Bonacci
Wararkii Ugu Dambeeyay: 02-07-2021
Waxaa daabacay soo -saaraha ciyaarta madaxbannaan Rovio, Angry Birds waa ciyaar aad u xiiso badan...
Happy Wheels, oo sidoo kale loo yaqaan Happy Wheels oo af Turki ah, waa nooca kumbuyuutarka ee...
slither.io waa ciyaar abeeso ah oo noqon karta ikhtiyaar wanaagsan oo waqtiga lagu dilo. ...
Candy Crush Saga waa ciyaarta ugu xiisaha badan 3 ciyaarta oo aad kala soo bixi karto oo aad ku...
Shooter Bubble Shooter waa ciyaar caadi ah oo soo boodaya oo aad ku ciyaari karto kombiyuutarkaaga....
Run Temple: Oz waa ciyaar baxsad oo aad ciyaari karto haddii aad isticmaaleyso kombiyuutar ama...